Mangosteen any Thailand ~ Journey-Assist - Voankazo any Thailand. Mangosti
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Voankazo any Thailand » Mangosteen
Mangosteen (Mangosteen, Garcinia, Mangkhud)
Ny vidin'ny isany isaky ny vanim-potoana dia miankina amin'ny habeny sy eo amin'ny 25 ka hatramin'ny baht isaky ny kg.
Amin'ny vanim-potoana tsy ampoizina, mahatratra 100 baht isaky ny kilao ny vidiny.
Ny fotoam-pahavitrihana dia manomboka ny volana martsa ka hatramin'ny Novambra. Ny ambiny sisa dia tsy fahita firy eo amin'ny talantalana izany ary ny vidin'izy ireo dia miakatra amin'ny fotoana mitovy.
Ahoana ny fanadiovana sy hihinanana ny Mangosteen
Azonao atao ihany koa ny tsy mahaliana firy, fa vao haingana kokoa. Hetezo ny felam-pandrefesana eo amuron 'ny ekoatera Ny zavatra ao amin'ny mangosteen matotra dia misaraka amin'ny voanjo.
Mangosteen dia lohahevitra iray tsara. Ny voankazo dia mazava tsara. Ao Bali, farafaharatsiny, izay tena matsiro. Azo antoka fa tsy ratsy kokoa any Thailandy.
Moraoviana amin'ny tanana mora foana izy io. Mamoaka azy fotsiny ny eo an-toerana mandra-pahatongan'ireo lozam-pifamoivoizana, ary avy eo potipotika mora foana amin'ny alàlan'ireo famonosana ireo, manaisotra ny voan-paosy ary tratra iray manontolo.
Ary raha tsy misy pentina volontsôkôlà ny nofo dia azo antoka ny matsiro.